Jananinepal.comभगवान् गणेश को हुन् ? किन गणेशलाई सबैभन्दा पहिला पुजा गरिन्छ ? जान्नुहोस पुरा तथ्य - Jananinepal.com
भगवान् गणेश को हुन् ? किन गणेशलाई सबैभन्दा पहिला पुजा गरिन्छ ? जान्नुहोस पुरा तथ्य
भगवान श्री गणेश आफ्ना माता पिताका साथ० भगवान श्री गणेशका पिता शंकर र माता पार्वतीलाई भनिएको छ। पौराणिक कालमा पार्वतीले शिव जीको शरीरको मयल ९जो खरानी घसेर जम्मा भएको थियो० एकत्र गरिन्। भगवान शिव जी बाहिर गएको बेला माता पार्वतीले त्यही मयलको बालक बनाएर ढोकाम राखि आफु भित्र बसिन्। यो काम उनले भगवान शिव जीलाई छकाउनको लागि गरेकी हुन्।
यसो सुनेर माता पार्वति त्यो त मेरो पुत्र हो तपाईँले त्यसलाई मारी दिनु भयो भनि रुन लागिन्। यो देखेर भगवान शिवलाई पनि दुस्ख लाग्यो उनले भगवान बिष्णुलाई भने “मैले बालकको टाउँको फुटाली दिञँ अब त्यो टाउको काम लाग्दैन तपाईँ गएर कुनै पनि प्राणीको टाउको ल्याएर आउँनुहोस् बालकलाई जिवित गर्नु पर्छ” यो सुनेर भगवान विष्णु बाहिर गई हात्तिको टाउको ल्याएर आए। त्यो टाउको काटिएको हात्तीलाई पनि गँगटाको रूपमा अर्को प्राणी बनाए।त्यही हात्तीको टाउको लगाएर बालकलाई जिवित गरियो पछि गएर उनको नाम गणेश राखियो ।
श्री गणेशको रूपले के भन्दै छ रु भन्ने बारेमा टिपणी